यसरी बदलिए ओली, अब प्रचण्डसंग हात मिलाउदै ! • raradiodarpan.com
यसरी बदलिए ओली, अब प्रचण्डसंग हात मिलाउदै !
भनिन्छ राजनीतिमा जुनसुकै बेला पनि चमत्कार हुनसक्छ । नेकपा एमाले र माओवादी एकिकरण हुँदा चमत्कार भन्दै सबैले प्रशंसा गरे । तर त्यो एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । हुँदा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कुनै बेला एक अर्काको नामै सुन्न चाहँदैन थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अर्काको टिप्पणी गर्दै समय खर्चिए । तर अहिले फेरी वातावरण चमत्कारीक ढंगले अघि बढ्न लागेको अनुमान सबैले गरेका छन् ।
आइतबार एकाबिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरे र आइतबार नै उद्घाटन हुन लागेकोआठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अतिथि बनेर आइदिन अनुरोध गरे । यस अघि अनुहारै हेर्न मन नपराउने उनीहरुबीच दोहोरो कुराकानी भयो ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि दुई जना केही बेर भलाकुसारी गरेको दृष्य सबैले रोचक मानिरहेका थिए । सम्भवतः तत्कालिन नेकपा विभाजनपछि उनीहरुबीच टेलिफोन कुराकानी दूर्लभ मात्रामा मात्रै भएको छ । शनिबार सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका प्रचण्डले माधव नेपाल र आफु विगतदेखि नै एकताको पक्षमा रहेको भन्दै ढिलोचाँडो एकिकरण भएरै छोड्ने उद्घोष गरे ।
उनले ओलीलाई पनि त्यसमा मिलाउने संकेत गरेका थिए । उनीहरुबीच यसरी अचानक हार्दिकता आफै बढेको भने होइन । त्यसमा केही आन्तरिक र बाह्य कारण रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । केही दिनअघिमात्रै एमाले अध्यक्ष ओली र चिनिया राजदूत होउ यान्छीबीच भेटवार्ता भएको थियो । चीन जहिले पनि नेपालको कम्युनिष्ट एक हुन् भन्ने चाहन्छ ।
नेकपा एकता भाँडिएकोमा चीन खुसी थिएन । उनले ओलीसंगको भेटमा कम्युनिष्ट एकताको कुरा गरेको बुझिएको छ । चिनिया राजदूत यान्छीले प्रचण्डसँग पनि केही समयअघिको भेटमा सोही कुरा गरेकी थिइन् । ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताले सरकार ढाल्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै यान्छीसंग प्रचण्डको गुनासो सुनाएका थिए ।
चीन विगतदेखि नै ओली–प्रचण्ड एकताको पक्षमा खुलेरै लागिपरेको छ । तर चाहनाविपरित नेकपा विभाजन भएपछि हार महशुस गरेको चीन अब फेरि एक बनाउने कसरतमा छ । यता कम्युनिष्ट नेताहरुले पनि जुटेर मात्र आफ्नो पार्टीको अस्थित्व जोगाउन सकिन्छ भन्ने राम्रैसंग बुझेका छन् । माघ १२ मा राष्ट्रिय सभा र बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । गठबन्धन कायमै रहे राष्ट्रिय सभाको चुनाव एमालेका लागि असहज देखिन्छ ।
यता कांग्रेससंगको गठबन्धनको भविष्य प्रचण्डले राम्रो देखेका छैनन् । किनकी कांग्रेको एउटा पंक्ति गठबन्धन चाहदैन । यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्ट एक हुनुको विकल्प छैन । आगामी निर्वाचनमा पहिलो हुँदै फेरि देशको नेतृत्व गर्ने ओलीको अन्तिम लक्ष्य छ । त्यसका लागि कम्युनिष्टबीचको एकता नै ओलीका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ ।